Dual nkwusioru 26 inch igwe kwụ otu ebe | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik Nnukwu ọkụ eletrik 26 nke eletrik igwe eletrik A6AH26-S
Moto: 36V / 48V 250W / 350W / 500W / 750W Hub Motor
Batrị: Batrị Lithium 36V / 48V 8Ah / 10Ah / 13Ah
Ugbo Max: 40-60km kwa ụgwọ
Ocheeze: Thumb Throttle
Ngosipụta: Ikpuchi ihuenyo LCD
Kwadobe: 7/9/21/27 Gears
Brek: Disks N'ihu & N'azụ
Okpokoro: Aluminom Light Weight Alloy
Nkwusioru: Nkwusioru abuo (F / R)
Mgbachi 26 nke igwe eletrik eletrik
Ọ bụ igwe kwụ otu ebe ka ọ dị ka igwe elegharị anya mana ọ dị ka igwe. Nke a igwe eletrik jiri mkpịsị ugodi abụọ, 36v 350w brushless hub motor na batrị zoro ezo 36v 10ah.
Igwe ngosi LCD dị iche iche Ezubere ma mepụta site na ụlọ ọrụ anyị, dị mfe ịchịkwa àgwà ahụ, nwere ike igosi Ogologo, Mileage, Okpomọkụ, Volta na ihe ndị ọzọ. Ị nwere ike mfe iji ya na akwụkwọ ntuziaka ahụ.
Zoro ezo batrị Anyị na-eji ụdị batrị zoro ezo maka ụdị igwe eletriki igwe eletrik. Ekepụtara ebike ma ọ bụ mepụta site na ụlọ ọrụ nke aka anyị. Nnọọ pụrụ iche. Imirikiti ndị mmadụ agaghị amata na ọ bụ igwe eletrik eletrik na anya mbụ ha. Igwe batrị bụ nke mbughari ka ịnwere ike ịgba ya na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ iche iche n'ime ụlọ gị.
Front na azụ 160 diski breeki Chebe onwe gị pụọ na mberede ọ bụla na nkwụsịtụ anya n'ime mita 3. Jikọọ ya na eriri ejiji nke bụ ọkụ ọkụ na-apụ apụ mgbe ị na-egwu ụkwụ. Nchekwa nke ịgba ígwè ka mma.
Brushless moto Inye na 250W / 350W elu ọsọ haziri brushless moto, max ọsọ bụ 25-30km / h. Ọ dị ike nke na ị naghị echegbu onwe gị banyere ugwu ma ọ bụ ikuku.
More Electric Bike: 26 nke anụ ọhịa ahụ na-ekpo ọkụ ire ere igwe eletriki, nkwonkwo nkwanye ugwu ejikọtara ya na igwe kwụ otu ebe, 26/28 nke anụ ọhịa eletrik obodo, karama igwe eletrik igwe eletrik.
Tags:igwe eletrik 26 nke igwe eletriki igwe eletriki okpukpu abụọ eletrik igwe eletrik
Mbụ: Mens ndị ọhụrụ eletrik eletrik A6AB26
Next: 48V500W igwe eletrik ugwu igwe A6AD26